Uyenza njani ilaphu ebhodi yebhodi | IBezzia
Uyenza njani ilaphu ebhodi yentloko ebhedini
UToñy Torres | 14/10/2021 10:00 | Yenze ngokwakho
Ukuhombisa indlu ngamalaphu yeyona ndlela izisa ubushushu nokufudumala kwekhaya kuwo onke amagumbi. Nokuba ikuvumela ithuba lokuhlaziya umhombiso ngokulula, kunye notshintsho oluncinci kunye notyalo mali oluncinci. Kungenxa yokuba awudingi kuba ngumthungi oyingcali, okanye unezixhobo ezifanelekileyo zokuthunga, kuba namhlanje kukho iindlela eziluncedo kakhulu zokwenza zonke iintlobo zezinto ezinamalaphu.
Kule meko siza kwenza i-headboard yelaphu ebhedini, isiqwenga sokuhombisa esiza kuba luncedo kakhulu. Xa ufuna ukuchitha ixesha elithile ufunda ngaphambi kokuba ulale okanye ukuba ufuna ukungqengqa ubukele umabonakude, awuzukufuna ukuba ube nemiqamelo emininzi. Kuba eyakho ibhodi eyintloko iya kukunceda lala ungakhange ujikeleze ubeke imithwalo emva koko. Iyasebenza, ihombisa kwaye kulula ukuyenza emibini kwenye.
1 Uyenza njani ibhodi yentloko yelaphu
1.1 Izinto eziyimfuneko
1.2 Amanyathelo okwenza i-headboard yelaphu eyenziwe ngezandla
Uyenza njani ibhodi yentloko yelaphu
Eyona ndlela ilula yokwenza i-headboard yelaphu kukuba ube nomatshini wokuthunga. Yinto elula kakhulu onokuyenza nokuba awuyiyo ingcali yokuthunga. Kanjalo Unokufumana umatshini wokuthunga ophathwayoIsixhobo esinexabiso eliphantsi onokwenza ngalo amalungiselelo amancinci kunye nokwenza izinto ezilula ezinje.
Okokugqibela, uhlala unokhetho lokuthunga ngesandla. Nangona iziphumo zingayi kufana naleyo ifunyenwe ngokuthunga umatshini, Kungumsebenzi wobugcisa kwaye nawuphi na umahluko uyakuba yinto eyenza ukuba ikhetheke. Ngemigangatho esisiseko kunye nomonde omninzi, unokwenza ibhodi yebhodi yentloko yakho.
Kuqala kuya kufuneka silinganise udonga ukuze sithathe imilinganiselo efanelekileyo yezixhobo. Ngokubanzi, ibhodi yentloko kufuneka ilinganise ngokufanayo nebhedi okanye iisentimitha ezimbalwa ngaphezulu, nangona iyinto eyenziwe ngesandla ngokupheleleyo unokukhetha umlinganiso owufunayo. Ibhedi enye, eyona nto ifanelekileyo kukwenza ibhedi enye njengebhodi eyintloko. Xa kuziwa kwibhedi enkulu, sinokukhetha phakathi kokwenza esinye okanye ezibini iziqwenga.
Ngebhedi eyi-90 cm ezi zizinto esiza kuzifuna.
Indwangu ye-Canvas, Ngomzimba kunye nokuxhathisa ukuhlala ixesha elide. Imilinganiselo yokugqibela iya kuba yimitha e-1 ububanzi ngeesentimitha ezingama-80 ukuphakama. Ke siyakudinga iziqwenga ezibini zelaphu eziyi-1,20 iisentimitha ububanzi nge-1 yemitha ukuphakama, le milinganiselo ithathela ingqalelo izibonelelo zomthungo.
Isepha ikhithi yokuthunga okanye isiphawuli.
Inaliti kunye nentambo okanye umashini wothunga.
Intonga yekhethini yomlinganiso oyimfuneko kunye neenkxaso ezithile zokumisa ibha eludongeni.
Ukuzaliswa kwefayibha yemikhosi.
4 botones enkulu.
Amanyathelo okwenza i-headboard yelaphu eyenziwe ngezandla
Kuqala siza kuthatha imilinganiselo kumalaphu. Sizoba uxande kunye nomlinganiso ochanekileyo kunye nomnye malunga neesentimitha ezi-5 zomda weeams. Oku kuyakusinceda xa sithunga ukuba asiyongcali kwezi zinto.
Sisike ilaphu ngo umda ongaphandle.
Ngaphambi kokujoyina iziqwenga esiya kuzo gqiba imiphetho yamalaphu ngokugquma ngaphezuluNgale ndlela siya kubathintela bangangqinelani.
Ngoku siza kwenza ihem kwelinye lamacala obubanzi, uqinisekisa ukuba zihle kakhulu.
Siyaqhubeka nokuthunga iziqwenga zelaphu, ukulungiselela oku sijongana nabo kwaye sithunga kumacala ama-3 aseleyo. Ukushiya indawo apho besenze khona umphetho ngaphandle kokujoyina.
Sijike sayodlulisa iplate ngokusebenzisa iiplanga ukuze zibe mpuluswa kakhulu.
Ngoku siza kwenza ezinye iziporo zebhanti, kule meko siya kufuna i-4 yokulinganisa imitha enye ububanzi. Imilinganiselo iya kuba ziisentimitha ezingama-20 ubude ngesi-8 ububanzi. Sishiya isibonelelo somthungo, sisika iziqwenga zelaphu, sagquma imiphetho kwaye sathunga iziqwenga ezichaseneyo, sishiya icala elinye lingafakwanga. Sijika isiqwenga ngaphezulu, sidlulise isitya kwaye sithunge icala elilahlekileyo.
Ukugqiba ii-loops zebhanti masenze amaqhosha amaqhosha, ungasebenzisa umatshini wakho wokuthunga okanye ubenze ngesandla.
Sibeka iluphu kwilaphu Ukuze wazi apho ubeka khona amaqhosha, qiniseka ukuba onke akufuphi.
Ngoku siyathunga amaqhosha kwimvulophu yelaphu.
Sithungela ii-loops zebhanti kwelinye lamacala alo ngasemva kwentloko yebhodi.
Siyavala ngamaqhosha kwaye sigcwalisa i-headboard nge-fiber yemikhosi.
Sele sinentloko yebhodi egqityiweyo, kufuneka sibeke izixhaso zentonga yomkhusane eludongeni. Faka ibar ngokusebenzisa ii-loops kwibhodi eyintloko kwaye uyibeke ebhedini yakho. Ngenjikalanga yokuthunga uya kuba nebhodi yakho entsha elungele ukunika umoya owahlukileyo kwigumbi lakho lokulala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Yenze ngokwakho » Uyenza njani ilaphu ebhodi yentloko ebhedini
Iindaba zoncwadi ezikusa kwelinye ixesha
Yintoni umgangatho we-pelvic kunye nendlela yokuwomeleza